कबिता: तरकारीवाली - Asian Samachar
Asian Samachar शनिबार, कार्तिक २७, २०७३ (1 year ago) कला/साहित्य
रगतको नाता नभएकी बहिनी
११ कक्षाबाट एकाएक
भाइरल भएर तरकारी `वाली´ भएछ्यौ ।
बुझ्छ्यौ नि तरकारीको अर्थ ?
थाहा पायौ नि वालीको मतलव ?
घरवाली, बाहरवाली वा त्यस्तै त्यस्तै ।
भारतीयले दिने उपमा
कि बहादुर हो
कि ए वाली कि वह वाली ।
उनीहरूको चासो फगत
तिम्रो ओठको – पराग सिञ्चन
तिम्रो बक्षको – भक्षण
तिम्रो नितम्बको – लोकार्पण
तिम्रो यौवनको – समुद्घाटन
आजको सम्पादकीयमा लेखेका छन्
सयदिनमा सिन्का पनि भाँचेन ।
तिम्रो अन्तरवार्ता पढिरहेका छन् ।
तिमीलाई बजारमा भेट्न चाहने पिपासुहरू
तिम्रै फोटोको दुरुपयोग
गरी फेसबूक आइडी बनाइरहेका छन् ।
काठमाडौँमा भारतीय राष्ट्राध्यक्षलाई
काठमाडौँ नागरिक अभिनन्दन गरिसकेका छन्
तिमीलाई थाहा होला नहोला
नेपाल भनेको काठमाडौँ रहेछ ।
विनाआधार आरोप लगाउँछन्
केही गर्न सकेन रे !
काठामाडौँको साँचो बुझाउनु
केही गर्नुहोइन र !
कुशुम थाहा छ तिमीलाई
काठमाडौँ तिम्रै खाल्डो हो ।
त्यो खाल्डोको साँचो
भारतीय प्रणव मुखर्जीले लिएर गए ।
र, तिम्रो पुर्खाहरू ?
तिमी आफ्नो फोटो
भाइरल भएकोमा मक्ख छ्यौ ।
चरित्रको विचित्र चरित्र ।
भर्खरै त तिम्रो कुर्ता उतारेर
फूटो शूट भएको छ ।
तिमीलाई कास्टिङ काउचको बारेमा
केही थाहा छ कुशुम ?